à¤…à¤•à¥�à¤¤ à¤¸à¤®à¥�à¤ªà¤¤à¥�à¤¤à¤¿ à¤†à¤°à¥�à¤œà¤¨ à¤—à¤°à¥‡à¤•à¤¾ à¤œà¥‹à¤¶à¥€à¤•à¥‹ à¤®à¥�à¤¦à¥�à¤¦à¤¾ à¤¸à¤°à¥�à¤µà¥‹à¤šà¥�à¤šà¤²à¥‡ à¤¹à¥‡à¤°à¥�à¤¨ à¤¨à¤­à¥�à¤¯à¤¾à¤‰à¤¨à¥‡ ! - OneZero News
à¤…à¤•à¥�à¤¤ à¤¸à¤®à¥�à¤ªà¤¤à¥�à¤¤à¤¿ à¤†à¤°à¥�à¤œà¤¨ à¤—à¤°à¥‡à¤•à¤¾ à¤œà¥‹à¤¶à¥€à¤•à¥‹ à¤®à¥�à¤¦à¥�à¤¦à¤¾ à¤¸à¤°à¥�à¤µà¥‹à¤šà¥�à¤šà¤²à¥‡ à¤¹à¥‡à¤°à¥�à¤¨ à¤¨à¤­à¥�à¤¯à¤¾à¤‰à¤¨à¥‡ !
काठमाडौं । विशेष अदालतबाट भ्रष्टाचारी ठहर भएका गोविन्दराज जोशीको मुद्दाको फाइल अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले सर्वोच्च अदालतमा बुझाए पनि हेर्न नमिल्ने सूचीमा राखेको छ । पटक–पटक मुद्दा स्थगित र हेर्न नभ्याउने सूचीमा राख्दै आएको सो मुद्दा १२औं पटक हेर्न नमिल्ने सूचीमा राखिएको हो ।
प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर राणाले हेर्न नमिल्ने सूचीमा पेसी तोकेपछि सो मुद्दा अर्को महिनाका लागि सरेको छ । सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्की र डम्बरबहादुर शाहीको संयुक्त इजलासले मुद्दा हेर्न नमिल्ने सूचीमा राखिएको हो । न्यायाधीश कार्कीले कानुन व्यवसायी हुँदा जोशीविरुद्धको भ्रष्टाचार मुद्दामा बहसमा भाग लिएका थिए । यसकारण, सो मुद्दा हेर्न नमिल्ने सूचीमा राखिएको हो । सर्वोच्चले सो मुद्दाको अर्को पेसी २३ साउनका लागि तोकेको छ ।
यसअघि सो मुद्दामा सर्वोच्च अदालतले तीनपटक फाइल झिकाउन आदेश दिँदा पनि अख्तियारबाट जबाफ नआएपछि २३ जेठमा न्यायाधीश ईश्वर खतिवडा र सपना प्रधान मल्लको इजलासले कारबाही गर्ने चेतावनीसहित सो निर्णय आफैं लिएर आउन आदेश जारी गरेको थियो ।
विशेष अदालतले भ्रष्टाचारी ठहर गर्ने निर्णयविरूद्ध जोशीले दिएको पुनरावेदन ६ वर्षयता सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन छ । २०६० सालमा अख्तियारले कानुनविपरीत अकुत सम्पत्ति आर्जन गरेको भन्दै जोशीमाथि भ्रष्टाचार मुद्दा लगाएको थियो । यो खरब आजको राजधानी दैनिकमा छापिएको छ ।
विराटनगर / लगातारका वर्षाका कारण विराटनगरका अधिकांश क्षेत्र जलमग्न भएका छन् । कोशी अञ्चल अस्पताल डुबेको छ। सडकको पानी अस्पतालभित्र पस्दा औषधि पसलसहितका प्रशासनिक भवनसमेत नराम्रोसँग प्रभावित बनेका छन् । विराटनगरको दक्षिणी क्षेत्रका केही बस्तीमा पानीको सतह बढेपछि डुबानमा छन् भने बजार क्षेत्रमा पनि पानी जमेको छ । ढलको निकास नगरी सडक उच्च बनाइदिँदा अस्पतालभित्र...